.:: Life is Light ::.: 2007
1 comments Posted by ShweMyat at 4:01 PM
မော်ရင်ဟိုနဲ့ ချယ်လ်ဆီး လမ်းခွဲလိုက်ပြီတဲ့
1 comments Posted by ShweMyat at 8:18 PM
ချယ်လ်ဆီးအသင်းမန်နေဂျာ မော်ရင်ဟိုနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ ကြာသပတေးနေ့ မှစ၍ နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲလိုက်ပြီလို့အဲဒီနေ့ နံနက်(၁း၄၅)မိနစ်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
0 comments Posted by ShweMyat at 3:37 AM
မင်းသတင်းကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ မှတ်မှတ်ရရ မင်းနဲ့မတွေ့ခင် တစ်ရက်ကမှ ၀တုတ်တို့နဲ့တွေ့လို့ သူငယ်ချင်းအမေရဲ့ သတင်းကို မေးလိုက်မိသေးတယ်ကွာ။ တော်တော်လေးကို သက်သာလာပြီလို့ ပြောလို့ ငါတောင်ဝမ်းသာနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက် မင်းဆီကဖုန်းလာလို့ သတင်းကြားလိုက်ရတော့ ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။
Blog တွေမှာပဲသုံးသုံး၊ Website မှာပဲသုံးသုံး အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ နာရီဒီဇိုင်းလေးတွေပါ။ ကျွန်တော့် Blog ရဲ့ Side Bar မှာသုံးထားတဲ့နာရီလိုမျိုးပါ။ အောက်ကလင့်ခ်မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
. : : Download Here : : .
Google Sky တဲ့လား
1 comments Posted by ShweMyat at 1:18 AM
အင်တာနက်လောကရဲ့ ဘီလူးကြီး Google ကတော့ နောက်ထပ် Application တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဒါကတော့ Google Earth Software ပေါ်ကနေ Expansion အနေနဲ့ Run မဲ့ Google Sky ဆိုတဲ့ application ပါပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ထိုင်ကြည့်လို့ မ၀သေးခင်မှာပဲ အာကာသကြီးကို ပတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။ Galaxies တွေနဲ့ Nebulae တွေကိုပါ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးရှင်းသွားအောင် အောက်က Google ရဲ့ website လေးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
PC World Magazine 09-2007
PDF | English | Pages 153 | 28.5 MB
0 comments Posted by ShweMyat at 12:12 PM
Apple ရဲ့ Machintosh OS အတွက် File Recovery ဆောလ့်ဝဲလေးပါ။ Mac System မှာ Delete ဖြစ်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေကို Trash ထဲကနေ ပြန်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ Trash ထဲမှာပါ မရှိလောက်အောင် Delete လုပ်မိပြီဆိုလိုကတော့ ဒီ Software လေးကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးပါရစေ။အောက်က လင့်ခ် မှာ ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
P.S : ကျွန်တော်ဒီပိုစ့်ကို ရေးနေတုန်းမှာပဲ Apple ရဲ့ Website မှာ Version 6.0 - Demo ကို Download လုပ်လို့ရနေပါပြီ။
Labels: Download, File Recovery, Machintosh
0 comments Posted by ShweMyat at 9:58 AM
ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ ခွေးလေးလေ၊ ကျွန်တော့်အတိုင်းပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ အရမ်းလဲ လိမ္မာတယ်လေ၊ ဟဲ ဟဲ ဟဲ၊ တစ်ခုပဲ ဒီကောင်က Click လုပ်ပြီးခိုင်းမှ နားလည်တယ်လေ။ ဘယ်လောက်လိမ္မာလဲသိချင်ရင် Click လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ =)
0 comments Posted by ShweMyat at 3:22 PM
AFTER USING SOFTWARE
အပေါ်က ပုံလေးလိုမျိုး လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ချင်ရင်တော့ Nature Illusion Studio ဆိုတဲ့ Software လေးကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ရေလှိုင်းလေးတွေလှုပ်နေတဲ့ Effect အပြင်၊ အခြား နှင်းကျတာနဲ့ မိုးရွာတဲ့ Effect လေးတွေကိုပါ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
Harry Potter's Final Book
0 comments Posted by ShweMyat at 2:12 AM
ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်တွေရဲ့ ခုနှစ်အုပ်မြောက်စာအုပ် Harry Potter and The Deathly Hollows ပါ။ အောက်က Link မှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်။
Labels: Download, Harry Potter Book
0 comments Posted by ShweMyat at 11:25 PM
Posted by ShweMyat at 2:01 PM
0 comments Posted by ShweMyat at 10:03 AM
လိပ်စာကတော့ www.starhub.com ပါ။
0 comments Posted by ShweMyat at 1:11 AM
[ http://beta.zooomr.com/ ]
Flicker , Photobucket တို့လိုမျိုး Photo တွေ share လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာလေးပါ။ Unlimited uploading ဆိုတဲ့ အားသာချက်လေးကတော့ flicker ထက်သာပါတယ်။
Source : http://www.twistermc.com/
0 comments Posted by ShweMyat at 5:54 AM
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်(မီးငယ်) မေးလ်နဲ့ ပို့လိုက်တာလေးတွေပါ။ ကြံကြံဖန်ဖန် ဘယ်လိုများ စိတ်ကူးရလဲမသိဘူးဗျာ။ ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
ကဲ. မိတ်ဆွေ သင်ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ။
0 comments Posted by ShweMyat at 1:09 PM
Photoshop နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ Brush လေးတွေ Download ချလို့ရတဲ့ နေရာလေးပါ။ ဒီဇိုင်းလုပ်ရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
Labels: Brush, Download, Photoshop
0 comments Posted by ShweMyat at 9:20 AM
Metal , Nu Metal သီချင်းတွေကို နားထောင်လို့ကောင်းအောင် သီဆိုတတ်တဲ့ KoRn ရဲ့ Unplugged Version Album ပါ။ Unplugged version တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သီချင်းအပြင်းတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Evanescence အဖွဲ့က Amy Lee နဲ့တွဲဆိုထားတဲ့ Freak On A Leash ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
05. Creep (RADIOHEAD cover)
10. Make Me Bad/In Between Days (feat. Robert Smith of THE CURE)
ဒီ Link တွေမှာ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
0 comments Posted by ShweMyat at 2:52 AM
နှစ်သစ်မှာ Blogger သူငယ်ချင်းများအားလုံး၊ ပြည်တွင်း - ပြည်ပက သူငယ်ချင်းများအားလုံး၊ စိတ်၏ ချမ်းသားခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမားခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Labels: my myanmar, new year, wish
သင်္ကြန် . . . သင်္ကြန်
1 comments Posted by ShweMyat at 9:06 PM
From : MODiNS
Labels: cartoon, thingyan
0 comments Posted by ShweMyat at 11:13 AM
Microsoft ရဲ့ New Generation Exams တွေဖြစ်တဲ့ MCTS [Microsoft Certified Technology Specialist] Exam တွေထဲက MCTS Web Applications Exam ကိုဖြေဆိုမည့်သူတွေ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်လေးတွေပါ။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
MCTS Self-Paced Training Kit :
MCTS Exams ရဲ့ Web Applications, Window Applications, Distributed Applications တွေကို ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည့် ဘာသာရပ်ဖြစ်တဲ့ [Exam 70-536] ပါ။
MCTS Self-Paced Training Kit:
[Exam 70-528] ပါ။ ASP.Net ကို အဓိကထားပြီး ဖြေဆိုရတာပါ။
Labels: Download, ebook, MCTS, mircrosoft exam
0 comments Posted by ShweMyat at 1:24 PM
> > > Download Here ! ! ! < < <
Description : For CCNA Exam 640-801
Labels: CCNA Exam, Download, ebook
0 comments Posted by ShweMyat at 12:33 PM
. . : : [ Download Here ] : : . .
Implementing Microsoft ISA Server 2004
Description : For Microsoft Exam 70-350
Labels: Download, ebook, mircrosoft exam
0 comments Posted by ShweMyat at 9:50 AM
Dear MyMyanmar User,
One of the most annoying thing for Myanmar people browsing websites is that different websites use different Non-Standard Unicode Fonts. If you want to see one website, install its own font and for another, install another font. And of course, for MyMyanmar users, they won\_'t want to install many other fonts each time they browseawebsite.
We just createdacutting-age solution to solve such problems. MyOne isaFirefox extension which will help you transcode websites you view. Each time you viewawebpage, it will automatically change the website from its Non-Standard Unicode Font to MyMyanmar. All you need to have is MyMyanmar + MyOne and view any Myanmar website on the Internet. No need to downloadafont anymore.
MyOne runs on Firefox browser 1.5 to the latest versions. It even solves problems for websites written with some fonts have conflicts with latest versions of Firefox. Every MyMyanmar user is recommanded to learn more and install this extension here.
အဲဒီလိုတော့ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။
Labels: my myanmar, my one, myanmar unicode
0 comments Posted by ShweMyat at 9:55 PM
Wanna See More!!! [ www.kissmyfloppy.com ]
2 comments Posted by ShweMyat at 9:56 AM
ဘယ်တော့ နားထောင် နားထောင် ရိုးမသွားတဲ့ သီချင်းလေးတွေပါ . . .
ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်နားတောင် နီးလာပြီနော် . . .
01. ကနဦး စကားပြော
Labels: Download, songs, Thingyan Moe
Let Share Files
0 comments Posted by ShweMyat at 1:02 PM
Online Storage Site လေးပါ။ Free Users များအတွက် Storage Size 1 GB ပေးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော့် Blog ရဲ့ ညာဘက် Side Panel ကလိုမျိုး Share Box Widget လေးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
Labels: Share, Storage, Tip, widget
0 comments Posted by ShweMyat at 11:55 AM
Book Title - John Wiley & Sons - Linux For Dummies, 6th Edition
File Size - 6.14 MB
. : : [ Download Here ] : : .
0 comments Posted by ShweMyat at 3:41 PM
2 comments Posted by ShweMyat at 10:08 AM
လျက်သွားပါလိမ့် . . .
ကျန်ခဲ့တယ် . . .
Credit By: လွင်မင်းအံ့
0 comments Posted by ShweMyat at 9:40 AM
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် . . .
iF U W@nN@ $33 My Wi$h
0 comments Posted by ShweMyat at 7:40 AM
မှတ်ချက်။ ။ Server 2003 ကို Self-Study လုပ်လိုသူများအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ MCP Exam 70-290 အတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
LINK : http://www.mediafire.com/?4tykyookymh
DesigningaMicrosoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure [Question and Answer]
မှတ်ချက်။ ။ MCP Exam 70-297 ကို ဖြေဆိုရန် လေ့လာနေသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်လေးပါ။
Link : http://www.mediafire.com/?ejnnommm1z2
Installation, Configuration and Administering Microsoft Window XP Professional [Question and Answer]
မှတ်ချက်။ ။ MCP Exam 70-270 ကို ဖြေဆိုရန် လေ့လာနေသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်လေးပါ။
Link : http://www.mediafire.com/?6z5zgfwmg2u
0 comments Posted by ShweMyat at 7:36 AM
Blog တွေဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဖွင့်လိုက်တဲ့ Blog တိုင်းလိုလို Error တွေတက်နေပါလား။ ငါ့ Blog လေးတော့ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူးထင်တာပဲ။
0 comments Posted by ShweMyat at 10:48 AM
ကျွန်တော် Third-party Software လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပါရစေ။ Apple Mac System နဲ့ Window System PC တွေကြား Network ချိတ်ဖို့ လိုလာရင်တော့ ဒီ Software လေးကို သုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့လို Widow system နဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ Mac ရဲ့ Network Installation တွေကို လုပ်ရတာ ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ အတွက်နဲ့ ခေါင်းစားနေတာ တစ်နေကုန်ရောပဲ ။ IP တွေလဲ မှန်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Connect လုပ်လို့ မရလဲ မသိဘူး။ Domain အောက်ကို ရောက်မလာဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ဒီ Software လေးတွေ့မှ ပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ နာမည်က PC Manlan ဆိုတဲ့ Software လေးပါ။ ဒါပေမယ့် စက်တိုင်းမှာတော့ IP တွေထည့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အိုကေ အောက်မှာ Downloa ချဖို့ Link ပေးထားပါတယ်။
Size : 23.11MB
..:: [ Download Here ] ::..
0 comments Posted by ShweMyat at 8:39 AM
တစ်ခြားလူတွေကတော့ သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှ တွေ့တယ်ဗျာ။ Youtube က Video တွေကို အရင်တုန်းကလို .Flv Extension နဲ့ save ပြီး flv player နဲ့ပြန်ကြည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီဆိုဒ်လေးမှာ Youtube Video Link လေးကိုရိုက်ပြီး Start လုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ Extension နဲ့ Save လုပ်လို့ ရပါပြီ။
လိပ်စာကတော့ .:: [ http://vixy.net/flv_converter ] ::. ပါ။
0 comments Posted by ShweMyat at 12:11 PM
3 comments Posted by ShweMyat at 11:48 AM
You want an email that ends with @abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijk.com?
It is so long that…
Some web forms are unable to read your email address
People haveahard time typing in your email
25 MB storage capacity
Yeah, you’ll get the Longest Email Address in the Whole Wide World!
They also offers two paid accounts at US $2.08/month for 250MB and US $4.16/month for 1GB with more advance features.
0 comments Posted by ShweMyat at 11:38 AM
[ http://www.flickr.com/photos/manikuttan/sets/72157594411939892/ ]
3 comments Posted by ShweMyat at 11:08 AM
::: Work in Only Internet Explorer :::
By : Posted by Grim @ Destructoid.com